साधना लघुवित्तको आइपिओ शेयरधनीको डिम्याट खातामा आईपुग्यो - E-BreakingNews
Home Karobar साधना लघुवित्तको आइपिओ शेयरधनीको डिम्याट खातामा आईपुग्यो
साधना लघुवित्तको आइपिओ शेयरधनीको डिम्याट खातामा आईपुग्यो
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार २१ गते आइतबारदेखि निष्कासन गरेको साधारण शेयर ७ लाख कित्ता आइपिओ निकालेपछि चुक्ता पूँजी २१ करोड ७७ लाख पुर्याएको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ शेयरधनीको डिम्याट खातामा आएको छ । उक्त कम्पनीको आईपीओलाई ‘एसडिएलबिएसएल’ संकेत दिइएको छ ।
२४ गतेसम्म ६ लाख ६१ हजार ५२० कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको थियो । उक्त आईपीओ ६६ हजार १५२ जनाले १० कित्ता पाएका थिए । हाल आईपीओ नेप्सेमा सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको छ ।
यसको ६७ दशमलव ५० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३२ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको छ । असार २९ गते, सोमबार बाँडफाँड गरिएको उक्त आइपिओमा ६६ हजार १ सय ५२ जना लगानीकर्ताहरुले १० कित्ताका दरले हात पारेका थिए भने बाँकी ३ लाख ८१ हजार ६ सय ९७ जना आवेदकको हात खाली भएको थियो ।
लघुवित्तले निष्कासन गरेको साधारण शेयर (आइपिओ) मा ४ लाख ५८ हजार ६४३ जना लगानीकर्ताहरुले १ करोड १२ लाख ५९ हजार ८५० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । जुन मागभन्दा १७ दशमलव ०२ गुणा धेरै हो । जसमध्ये १० हजार ३१ हजार जनाको आवेदन रद्द भएको थियो ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ८४ करोड ७१ लाख १९ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा रू. ६७ करोड १ लाख ५९ हजार थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गतवर्ष चौथो त्रैमासमा कम्पनीको खुद नाफा २६ दशमलव ४१ प्रतिशत बढी भएको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष सञ्चालन नाफा १४ दशमलव ६० प्रतिशत बढी भएको छ । उक्त कम्पनीले अघिल्लो वर्ष रू. ९६ करोड १२ लाख ५० हजार सञ्चालन नाफा गरेकोमा गत वर्ष रू. १ अर्ब १० करोड १६ लाख ५८ हजार गरेको छ । रासस